Zimbabwe · February, 2006 · Global Voices
Zimbabwe · February, 2006
Stories about Zimbabwe from February, 2006
Zimbabwe: bridges to London
Zimbabwean Pundit writes on the Zimbabwean media frenzy over reports that Mugabe has extended a gracious welcome to the new British High Commissioner, asking him to please “build bridges to London. Zimpundit concludes…”There's no need for this hullabaloo, it's just glimpses of old glory from a defunct former statesman, not...
Education 21 February 2006
Zimbabwe: The unreal lives of the very rich
This is Zimbabwe comments on the difference between the lives of the “filthy rich” Zimbabweans and the rest of the population. …”The ostrich syndrome is typical of the filthy rich upper class complacency, those who don’t vote because they don’t want to rock the boat, don’t read the papers because...
Burundi 20 February 2006
Zimbabwe: Women of Zimbabwe Arise (WOZA), a civic action group looking out for the welfare of Zimbabwean women, held their third annual valentine's day protest march. This is Zimbabwe blogged that flyers promoting the march brought Zimbabwe's second city, Bulawayo, to a standstill days before the event. This is Zimbabwe's...
Zimbabwe: IMF debt a waste of resources
Zimbabwean Pundit likens Zimbabwe's repayment of the IMF debt to that “the head of a family in a starving village, throwing food over the fence to baboons waiting on the outside, while the children of the village die of hunger, malnutrition and disease”
Food 15 February 2006
Zimbabwe: MDC infighting
This is Zimbabwe discusses who might be behind the infighting going on in the Movement for Democratic Change opposition party in Zimbabwe….
Zimbabwe: urban nightmares
Zimbabwean Pundit reminds us that for Zimbabwe's displaced urban dwellers, life has not changed …..”Large portions of Zimbabwe's urban dwellers continue to live undocumented lives outside of the meagre infrustructural support offered by the failing government.”
Zimbabwe: Opposition rejects Mbeki claims
The Bearded Man has a series of reports from Zimbabwe including “Zimbabwe Opposition Leaders Reject Mbeki Claims ” denying knowledge of an agreed constitution with Zanu-PF and the Zambian government states it does not want any Zimbabwean oppostion parties in the country.
Zimbabwe: news roundup
Zimbabwean Pundit has a roundup of news items on Zimbabwe from assasination attempts to deportation.
Zimbabwe: Morgan Tsvangirai deported
Citizen Media 6 February 2006
Yebo Gogo reports that Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai was deported from Zambia, allegedly for using a false name
Burundi 6 February 2006
Zimbabwe: Inflation continues to rule the day in Zimbabwe where they recently introduced a 50,000 dollar note in a bid to help hauling the country's porous currency around. Ironically, said new note is not enough to buy a loaf bread a mundane necessity so This is Zimbabwe asks, “Can anyone...
Zimbabwe: food shortages
The Bearded man has a roundup of Zimbabwean news: shortage of Zimbabwe's staple food, maize meal, means people are eating substandard bread if they can afford it; the issue of a Zim dollar 50,000 note which with the hyper inflation will buy 3.6 eggs or 4 candles.
Zimbabwe: arrest of students
The Passion of the Present reports on the arrest of 4 Zimbabweans who were carrying out research “on the effects of the government's controversial urban clean-up campaign after mistaking them for journalists.”